Daawo:- Afganistaan Ciidanka oo soo afjaray hotel ay weerareen koox hubeysan (SAWIRRO) | Entertainment and News Site
Home » News » Daawo:- Afganistaan Ciidanka oo soo afjaray hotel ay weerareen koox hubeysan (SAWIRRO)
Daawo:- Afganistaan Ciidanka oo soo afjaray hotel ay weerareen koox hubeysan (SAWIRRO)
daajis.com:-Ciidamada gaarka ah ee dowladda Afghanistan ayaa saaka soo gaba gabeeyay howlgal ay ku galeen Hotel caan ah oo ay xalay fiidkii galeen Koox hubeysan kuwaas oo qaraxyo iyo rasaas isugu daray dadkii Hotelka ku sugnaa.
Wasaaradda Amniga gudaha Afghanistan ayaa shaacisay in 5 Qof ay dhinteen,lix kalena ay dhaawacmeen,iyada oo Ciidamada amaanka ee Hotelka gurmadka u galay ay badbaadiyeen 150 Qof oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa Hotelka.
Hotelka la weeraray ayaa lagu magacaabaa Intercontinental,waxaana sidan oo lale 2011kii la weeraray ku dhintay 20 Qof,iyada oo markaas ay Dalibaan sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas.
Weerarka xalay ilaa saaka ma jirto ilaa hadda cid sheegatay waxaase la filayaa in Daalibaan ama Daacish ay midkood sheegtaan.
Weerarkan waxaa uu ku soo aaday iyada oo safaaradda Mareykanka ee Kabul ay digniin u jeedisay Hotellada Kabul in ay la kulmi doonaan weerarro argagixiso.